Giorgio Chiellini oo ka digay rajada joogtada ah ee jamaahiirta kooxda Juventus kadib imaatinka Cristiano Ronaldo – Gool FM
Giorgio Chiellini oo ka digay rajada joogtada ah ee jamaahiirta kooxda Juventus kadib imaatinka Cristiano Ronaldo
Dajiye August 5, 2018
(Juventus) 05 Agoosto 2018. Daafaca Juventus Giorgio Chiellini ayaa kaga jamaahiirta kooxda Juventus iyo saxaafada rajada joogtada ah ee ku aadan ku guuleysiga Champions League xilli ciyaareedka soo socda, kadib imaatinka Cristiano Ronaldo.
Juventus ayaa ka mid ah kooxaha ugu cad cad ee lala xiriirinayo in ay ku guuleysan doonaan koobka Champions League, kadib markii ay kala soo saxiixdeen Cristiano Ronaldo Real Madrid aduun dhan 100 million euro.
Cristiano Ronaldo ayaa waayihiisa kooxda Real Madrid kula soo guuleestay 4 jeer ee ah tartanka Champions League-ga iyo 5 jeer ee ah abaal marinta Ballon d’Or.
Giorgio Chiellini ayaa aaminsan in imaatinka Cristiano Ronaldo ay u tahay dhiiro galin xoogan “Wuxuu ina siin doonaa dhiiragalin xoogan, taasoo noo ogolaaneysa inaan sarre u qaadno heerkeena”.
“Lakiin taas macnaheeda ma ahan inaan u maleyno inaan ku guuleysan doono horyaalka iyo Champions League, sababtoo ah xaalada uma fududa sida loo qabo”.
Inter Milan oo dooneysa inay ujeedsato saxiixa xidig ka tirsan kooxda Manchester City
Manchester City oo guul Sahlan ka gaartay Chelsea Finaalka Koobka FA Community Shield+SAWIRRO